Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya Hadliye oo u matalaya madaxweynaha Golaha amaanka.. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya Hadliye oo u matalaya madaxweynaha Golaha amaanka..
A warsame 25 September 2016
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa khudbad uu kaga hadlaayo xaalada Soomaaliya ka jeediyay kulanka guud ee Qaramada Midoobey ee ka socda magaalada New york ee dalka Mareykanka.
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay arimo badan oo quseeya caalamka iyo sidoo kale xaalada Soomaaliya.
Wasiir Hadliye ayaa ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab , waxaana uu sheegay in dalalka Caalamka looga baahan yahay in ay dowladda Soomaaliya ay ka taageeraan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay wali gacanta ku hayaan.
Waxaa uu xusay in dalalka caalamka looga baahan yahay in ay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay wasiirka arimaha dibada Soomaaliya isbadelka Cimilada iyo sidoo kale dhaqaalo xumida soo wajahday qaar ka mid ah dalalka Caalamka.
Kulanka golaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa wali ka socda magaalada New York iyadoo ay khudbadaha madaxda caalamka lagu soo qaadayo arrimo badan oo kala duwan.
Disease outbreak news:Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Saudi Arabia